Nhau - PET firimu - yepamusoro chivakwa kurongedza zvinhu zvine safty vimbiso.
PET firimu-yepamusoro chivakwa kurongedza zvinhu zvine safty vimbiso.
Nebudiriro yemagariro, vanhu vari kuisa zvakanyanya uye zvakanyanya kukosha kuhutano. Kuchengeteka kwechikafu chinhu chikuru chinokanganisa hutano hwevanhu hwagara uchitorwa sechinhu chakakura nevagadziri vechikafu chekune dzimwe nyika uye hutarisiri hwakasimba. Chikafu kurongedza, kunyanya, kurongedza zvinhu zvakanangana zvakananga nechikafu, zvakanangana zvakananga nehutano hwechikafu, kumberi kune hutano hwenyama hwevanhu. saka pane zvinodiwa zvakanyanya muchikafu chekurongedza chikafu mune dzimwe nyika maererano nehunyanzvi hunyanzvi uye kuchengetedzeka kwehutano .mumakore achangopfuura, China yakasimbisawo kudiwa kwehutano hwekuchengetedza pane nzira yekugadzira chikafu. kupesana neiyi kumashure, zvakakosha kushandisa izvo zvekutakura zvekudya pamwe nekuchengetedza hutano hwekudya. sezvo chikuru kurongedza materia, BOPET firimu ine zvinotevera zvakakosha:
OodGood michina zvivakwa, 3-5 nguva inokanganisa simba mamwe mafirimu, inotsungirira mukupeta.
Kutsungirira kwakanaka nemafuta, mafuta, olefine acid uye mazhinji acho.
Kutsungirira kwakanaka nekunyanyisa tembiricha. inoshandisika mukureba kwenguva mu120 in, muchidimbu, inoshandisika mu150 down, kudzika ku -70 ℃, zvishoma kuita kune michina zvivakwa.
GasRow gasi uye mhute kukwana, yakanaka chipingamupinyi zvivakwa pamvura, mafuta uye hwema kunatsiridza pasherefu hupenyu.
FilmHigh yakajeka firimu, UV kutora, yakakwira glossy firimu.
Poisonno chepfu, hapana munhuwi, yakanaka heath chengetedzo chivakwa, inoshandiswa mune chikafu kurongedza zvakananga.
Vatengi vanonamira zvakanyanya uye zvakanyanya kukosha kune chikafu kurongedza zvinodiwa nehutano, esp. musherufu hupenyu, kutsva uye anti mabhakitiriya zvivakwa. saka kudiwa kwekuita kwakanaka PET firimu iri kuwedzera .ichi chinovandudza chikafu kurongedza mhando. mumakore achangopfuura mukusarudza iyo yekupakira zvinhu, zvakanyanya kusimbiswa kwakaiswa pazvinhu zveicho chinhu, izvi zvakakurudzira kuvandudzwa kwePET firimu.
Okisijeni kukwana chinhu chakakosha mukusarudza chikafu chekutakura chikafu, chehomwe yechikafu yakasimbiswa, pasherufu hupenyu hwechikafu hunosvika pakukwana kwe oxygen. Kunyanya kuputira kwekutsvaira uye anti okisiji kurongedza zvinhu.BOPET ine yakanakisa gasi chipinganidzo pfuma, pasi pekamuri tembiricha, pasherufu hupenyu hweBopet hwakarongedzwa chikafu zvakapetwa kaviri Bopp. Kunze kwezvo, Alu.plated Bopet Firimu ine kuita kuri nani maererano nekuputira paoxygen uye hunyoro humbowo kupfuura Bopp firimu. kunyorova kukwana kweAlu. kuifukidza Bopet firimu ichaenda pasi kusvika ku0.3 ～ 0.6 kubva pa40 kusvika 45.Versus Bopp, 0.8 ～ 1.2 pasi kubva pa5 ～ 7. (g ／ mm2.24h.40 ℃ neAlu. ukobvu 60 ～ 70mm)
Iko kushandiswa kwakazara kweBopet firimu mupakeji kunovandudza simba, reduecs kurongedza zvinhu pauniti huremu uye kusvibiswa. Zvichakadaro, inowedzerawo tembiricha renji, semuenzaniso kubva pakurongedza zvakanaka zvechando kusvika kune yakanyanya temp yakabikwa chikafu. Pamwe neakanakisa tembiricha kutsungirira zvivakwa (refu izwi rekushandisa mu120 ℃), inogona kushandiswa kune ovhowave oven. nekumhanya nekukurumidza kwehupenyu hwazvino, chikafu chine microwaved chichafarira mukurumbira mukuru pakati pevanhu.
Bopet firimu ndiyo yakanakisa zvinhu yesilicon dioxide inovhara yakanamirwa pamifananidzo. Silicon dioxide firimu inoitwa nekuisa girazi firimu kune BOPET firimu, kureva kuti chipinganidzo chivakwa chakagadzirwa negirazi rukoko. saka kuitira kuti uchengetedze chinodzivirira panguva yekuisa dhizaini uye mukushandisa gare gare, girazi girazi rinofanira kuchengetedzwa kubva mukukuvara. iko kushandiswa uye kuvandudzwa kwepamusoro-soro chipingamupinyi BOPET- firimu -vacuum -zvakasiyana -silica -okisheni -zvinhu zvakare zvakakurudzira kurongedza kwekudya chikafu kune chinongedzo chekujekesa kwakanyanya, zvakanyanya kushanda, nharaunda hushamwari zvinhu .vakuvha dhipoziti silica dioxide bopet firimu inonziwo girazi rakapfava, rine basa rakafanana nemabhodhoro egirazi mukuchengeta iyo flavour uye haigadziri chero kunhuhwirira mushure mekuchengetedza kwenguva yakareba kana kurapwa kwakanyanya uye inonakidzwa neAl chivakwa mune chinodzivirira basa. iyo firimu inoratidzira kujeka kumwechete mushure mecece deposit.so chikafu chinogona kuoneka zvakajeka kubva mupakeji izvo zvinokurudzira chishuwo chevatengi.
Hapana zvimwe zvekuwedzera zvinowedzerwa muBOPET kugadzirwa kwemafirimu, uye zvakare chinhu chakadzokororwa chinochichiita chine hutano, chakatipoteredza chakapakata zvinhu.